हतारमा पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ - आजकोNepal
हतारमा पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ
संवाददाता १६ भाद्र २०७७, 9:48 am
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सःशुल्क कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिएसँगै प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गराउनेको भीड लाग्न थालेको छ । आशंका लाग्नासाथ कोरोना परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ कि पर्दैन भन्नबारे सर्वसाधारणमा अन्योल नै छ । निरोगिताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेहरु भने पीसीआर परीक्षण गर्नैपर्ने अवस्थामा छन् । परीक्षण गराउनेको चाप बढेसँगै पछिल्लो समय भनसुन गरेर हतार–हतार परीक्षण गराएको पनि पाइन्छ । यसरी परीक्षण गर्नु कति उचित हो ? संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाले तुरुन्तै स्वाब परीक्षण गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? एक पटक कोरोना संक्रमण भएर निको भएपछि पुनः संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन ? पीसीआर परीक्षणले शत प्रतिशत सही नतिजा दिन्छ कि दिँदैन ? आदि बारेमा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसँग गरिएको कुराकानी –
संक्रमितको सम्पर्कमा आएको आशंका गर्नेबित्तिकै स्वाब परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ ? स्वाब परीक्षण कुन अवस्थामा गराउनुपर्ने हो ?
कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आउनेबिबिकै पीसीआर परीक्षण गर्नु हुँदैन, सम्पर्कमा आउनेबित्तिकै परीक्षण गर्दा नतिजा सही नआउन सक्छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएको ५÷७ दिनपछि मात्रै पीसीआर परीक्षण गरेमा सही नतिजा आउँछ । संक्रमण भएको आशंका गरेको दिनदेखि ५÷७ दिनपछि स्वाबको परीक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ ।
जसको शरीरमा भाइरसको लोड कम हुन्छ, त्यस्ताको शरीरमा जाँच गर्ने क्रममा भाइरस छुट्ने सम्भावना हुन्छ । यदि भाइरस छुट्यो भने गलत नतिजा आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । आशंका लागेर हतारमा स्वाब परीक्षण गर्दा ‘नेगेटिभ’ आउने भएकाले ५÷७ दिनपछि मात्र कोरोना परीक्षण गर्नु उचित हुन्छ ।
सामान्यतया आशंका लागेर तुरुन्तै स्वाब परीक्षण गर्दा शरीरमा भाइरसको लोड, विकास कम हुन्छ । र, सही नतिजा आउँदैन । तर कहिलेकाहीँ संक्रमितको सम्पर्कमा आएको आशंका लागेर तुरुन्तै कोरोना परीक्षण गर्दा पनि कोरोना पोेजेटिभ देखाउँछ ।